Ungase babone version scariest futhi okunokufutheka King Kong kumabhayisikobho futhi uchungechunge eqanjiwe. Kodwa kuthiwani uma kong esikhulu nesinamandla kuvela ukuthi funny ngempela futhi bakitaza nisangulukile? Well, Yilokho King Kong Cash uhloseni ngawe. Lezi entsha Slots ibhonasi inthanethi umdlalo isethwe ku kwesimo enhle ikhathuni isitayela jungle. Ungakwazi uqaphela esihlalweni itshe noma kunalokho isihlalo sobukhosi lapho King Kong ihlala enomqhele ekhanda lakhe. Uphakamisa njengenkosi kwehlathi kodwa ngempela umfana ezihlekisayo kule game. Ngikanye namalungu athile cool ngempela animation kanye ibhonasi izici, uqiniseka ukuthandana nale game. Ukudlala, kumelwe ukhethe ukubheja yakho lemali esisukela £ 0,10 kuya £ 500 spin ngamunye.
Mayelana unjiniyela King Kong Cash
Lokhu zibukeke emangalisa entsha Slots ibhonasi inthanethi umdlalo yasungulwa ngu Blue Print. Omunye Onjiniyela aphambili emhlabeni ngoba amakhasino aku-intanethi. Sinenkosi engaphezu kweyishumi nakho ekudaleni isigaba ezahlukene imidlalo esiye sasiza abantu ukwenza ezinye izimali zangempela.
Kusukela Uhlolojikelele, umdlalo ubukeka emangalisa ihluzo abacebile eliphezulu audio-isiqophi esibonakalayo. Amatshwayo umdlalo kukhona egqamile kakhulu futhi unikele bokugxwayiza ngokuwina. Ziyakwazi logo umdlalo, upholi, tiger, ubhejane ingwenya. I-logo inikeza pay phezulu 500x phezu ezinhlanu kokwehla yayo uhlobo phezu itolitji. The ephansi ukubaluleka izimpawu zalesi entsha Slots ibhonasi inthanethi umdlalo adlala amakhadi kusuka J kuya A. Kukhona izimpawu ezimbili ibhonasi kule mdlalo futhi Zimelela king of kong futhi emgqonyeni lokhuni.
Wild Symbol: I umgqomo uphawu zasendle lokhu entsha Slots ibhonasi inthanethi umdlalo basibekele kubo bonke kungabalwa king of kong. Izovela kuzo zonke itolitji emihlanu futhi ezinhlanu kokwehla yayo ngisho kukunikeza 500x esigxotsheni wakho.
King Kong scatter: Uphawu king of kong yinkulumo chitha yomdlalo kanye ezintathu noma ngaphezulu ke kuvula izici ibhonasi. Zikhona izici ibhonasi ezine ezahlukene futhi ngezikhathi ukhishwa yimuphi omunye wabo. Ziqukethe osebenzisa free, multipliers futhi ahlukahlukene jackpot win. Ngezinye ibhonasi ezingeni, wena waze isici gembula ukuthi ungayenza ukusebenzisa.
Lena ngenye yama-bezijabulisa kakhulu entsha Slots ibhonasi inthanethi ihluzo emangalisa nemisindo. Kukhona ngobuningi ibhonasi izici ukukusiza wenze ezinye imivuzo handsome nge ambalwa osebenzisa lucky.